बजार घट्दा सर्वाधिक कारोबार भएका कम्पनी कुन-कुन हुन् त ? - Arthasansar
बजार घट्दा सर्वाधिक कारोबार भएका कम्पनी कुन-कुन हुन् त ?
मंगलबार, ११ फागुन २०७७, १५ : ४० मा प्रकाशित
शेयर बजारमा आज हलचल मच्चिएकाे छ ।
मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २१.१६ अंकले घटेर २५८६.५१ मा पुगेकाे छ । नेप्से ०.८१ प्रतिशतले घटेकाे हो । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक २.४१ अंकले घटेर ४६७.९४ मा पुगेको छ । कूल २०५ वटा कम्पनीकाे एक कराेड ७७ लाख १४ हजार ९ सय १२ कित्ता शेयर खरिदबिक्री हुँदा ८ अर्ब ५६ करोड १५ लाख ३९ हजार ४ सय २६ रुपैयाँको कारोबार भएकाे छ ।
त्यसैगरी, घटेकाे बजारमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, अपर तामाकाेशी, नबिल बैंक लिमिटेड, एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड, ग्लाेबल आइएमइ बैंक लिमिटेड, नेकाे इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेपाल लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड र अपि पावर कम्पनी लिमिटेडकाे सर्वाधिक काराेबार भएकाे छ ।